Ukufinyelela Kwemithambo Ye-Gulfcoast Ultrasound Eqondiswayo: I-Comp Comprehensive ...
Ukufinyelela Kwemithambo Eqondiswa yi-Gulfcoast Ultrasound: Umhlahlandlela Ophelele we-2018
Ukutholakala Kwemithambo Ye-Ultrasound: I-Comprehensive Guide Online Course ihlelwe ngokuya nge-Agency for Healthcare Research & Quality (AHRQ), ACEP, kanye nemihlahlandlela ye-WINFOCUS. Le nkambo eku-inthanethi yenzelwe ochwepheshe bezokwelapha abenza ukufakwa kolayini ophakathi noma ohlangothini. Lolu hlelo luhlanganisa ukubuyekezwa okuphelele kwezisekelo ze-ultrasound, amasu okuqondisa, ukwahlukaniswa kwemikhumbi ye-ultrasound, ukusethwa kwenqubo, ukumiswa kwamabhanoyi nangaphandle kwezindiza zokwenza ukubekwa kolayini obuphakathi nendawo. Lesi sifundo esiziqondisayo sisefomethi ye-modular futhi sifaka izabelo zokufunda ezinconyiwe, izinkulumo zevidiyo eziku-inthanethi, izethulo zamacala, nemibuzo yokuxhumana eku-inthanethi. Ukubhalisa kuvumelekile izinyanga eziyi-12 (izinsuku ezingama-365) futhi kuqala umzuzu lapho obambe iqhaza ebhaliswa. Yandisa ukufinyelela kwakho kwezifundo eziku-inthanethi ezinye izinyanga ezi-3 ngokungezwa kwendawo yokusebenzela esetshenziswayo noma ukubhalisela i-workshop ehleliwe ye-GCUS.
- Chaza imigomo eyisisekelo ye-imaging ye-ultrasound esetshenziswe ngesikhathi sokuqondiswa kokufinyelela kwemithambo yegazi.
- Xoxa ngobuhle nobubi be- "In-Plane" ne "Out-of-Plane" ne "Direct" vs. "Indirect" eqondiswa ngamasu wokufinyelela ngemithambo we-ultrasound ..
- Hlukanisa i-venous vs. arteryial anatomy nge-ultrasound.
- Landisa izici ze-ultrasound imaging zemikhumbi kanye ne-anatomy ethintekayo ekhombisa indlela efanelekile yokufinyelela emithanjeni.
- Thola izici ze-ultrasound imaging ze-thrombus noma i-thrombophlebitic changes noma ezinye izimo ezingakhombisa ukuthi umkhumbi awulungele ukufinyelela emithanjeni.
- Khombisa ukusetshenziswa kwesiqondisi se-ultrasound sokufinyelela kwe-Peripheral Line semithambo.
- Khulisa ulwazi lomhlanganyeli ukuze enze kangcono izinqubo zokufinyelela ngemithambo eqondiswa yi-ultrasound.
Odokotela, abahlinzeki bezinga eliphakathi, kanye nabahlengikazi ababandakanyeka ekwenzeni ukufinyelela kwemithambo emigqeni emaphakathi nepheripheriya. Abahlanganyeli abangodokotela bangafaka (kepha kungagcini lapho) eziphuthumayo, ukunakekelwa okubucayi, isibhedlela, imithi yangaphakathi, ukunakekelwa okuyisisekelo.
- Izisekelo ze-UGVA
- Kungani Usebenzisa Isiqondisi se-Ultrasound?
- Amasu aqondile ngokuqonde 'okungaqondile
- Ezindizeni vs 'Out of Plane Techniques
- Izimiso Zokuhlukaniswa Kwemikhumbi Namathiphu Enqubo
- Ukubekwa Komugqa Ophakathi we-Ultrasound
- IJ, Ukufinyelela kwe-Axillary / Subclavian ne-Femoral Vein Access
- Ukubekwa Kwendlela Yomugqa Wokuqondisa we-Ultrasound
- Peripheral Line Ukubekwa
- Ukutholwa komthambo we-Antecubital
- Izindawo Zokufinyelela Ezengeziwe
- Isiguli Sezingane
- Amacala Emitholampilo
- Isibonisi se-Ultrasound Probe Cover
Ukufinyelela Kwemithambo YeGlucoast Ultrasound Eqondiswayo
Isikhungo se-Gulfcoast Ultrasound
Ukufinyelela Kwemithambo Ye-Vascoed Guides
Ukufinyelela Kwemithambo Ye-Vascoed e-Gulfcoast Eqondiswayo: Isiqondisi Esiphelele
Ukuhlinzwa Kwe-Thoracic & Vascular
Ukufinyelela Kwemithambo Ye-Ultrasound
Ukufinyelela Kwemithambo Ye-Ultrasound: Umhlahlandlela Ophelele
Ukufinyelela Kwemithambo Ye-Ultrasound: Umhlahlandlela Ophelele 2018